Kuze kube yimhla, i-industry yenkqubo ye-salon inokunika abathengi bayo ukhetho olukhulu lweenkonzo. Ezinye iinkonzo zifunwa kakhulu, kuba sele zizibonakalise zona. Abanye baqala ukuqala ingcambu kule ndawo, ukuphumelela abalandeli babo. Enye yale nkonzo i-Ayurvedic massage, esiza kuthetha ngayo kwinqaku elithi "I-ayurvedic massage: ubuchule, ubuchule."
Nsuku zonke inani labantu abanomdla we-Ayurvedic massage likhula, kuba lunceda ekunciphiseni ukuxhatshazwa, ukukhusela ukuphuhliswa kwezifo ezininzi. Ngaloo ndlela ungabona iindlela ezimbini: ubuchule bokuqulunqwa kweemisipha kunye nama-tissue adibeneyo, kunye ne-Indian system yokuphilisa. Imfundiso ye-Ayurvedic isekelwe ubunye kunye nokudibanisa umzimba kunye nengqondo. Njengomthetho, emva kokusilalisa umzimba, umzimba uphinde uxhawule ukulinganisela ngokomzimba nangokwengqondo. "Ukuphefumula okubalulekileyo" kwimizimba, oko kukuthi, ukuhamba kwamandla, ukhetha indlela efanelekileyo. Ukuba umzimba uphazamiseka yinkambo yokuhamba kwamanzi, umntu unokuhlakulela i-malaise, ekugqibeleni iholele kwizifo ezingapheliyo.
Ummangaliso wase-Ayurvedic - ukusilalisa: ubuchule.
Ukusilalisa kungenziwa njengomaster omnye, kunye nezandla ezine, oko kukuthi, ababini abaxhasi. Ngexesha leseshoni, ukukhuthazwa kwamaphuzu okusebenza ngokuzikhusela kwenzeka ngokuxininisa, ukuxubha kunye nokuphonononga ngokujulile izihlunu kunye nezicubu ezinotsho. Ezi ngongoma zifumaneka phantse kuwo wonke umzimba. Yiyo le ndlela yokusikrabhuza eya kunceda ukusetyenziswa kwegazi kunye nokuhamba kwe-lymphatic, ukuvelisa iigaments kunye nokunciphisa uxinzelelo lwe-muscle. Ngenxa yoko, imeko epheleleyo yomzimba iphucula, kunye neentloko ziyabhubha.
I-ayurvedic massage kufuneka isebenzise amafutha abalulekileyo. Le yimeko yakhe ebalulekileyo. Kukho iindidi ezininzi zeoli ezifunekayo eziqulethe izicatshulwa zezityalo, ngoko zikhethwe ngabanye, kuxhomekeke kwisiphumo esiza kufezwa ngoncedo lokusila. Ukungena kwesikhumba, iioli eziyimfuneko zenza i-detoxif effect effect emzimbeni, zisuse i-toxins emzimbeni. Oku kubangelwa ukuba ioli iindawo eziphazamisayo. Ngethuba lokuxiliswa kucetyiswa ukuba ufake umculo womculo we-mantra, kunye nokusebenzisa i-aromatherapy. Konke oku kukuvumela ukuba uphumule kwaye wenze ngokugqithiseleyo kwinkqubo yesantya yomntu.
Iziphumo zokuphila emzimbeni.
Ukuxilisa, ubuchule obuphelisa ngokupheleleyo uxinzelelo, luba lula ukulala kwaye bubuyisele uvuyo lobomi. Ngexesha leenkqubo, i-endorphins, ezibizwa ngokuba yi-hormone yolonwabo, ziveliswa. Ukongezelela, ukuhlalisa umzimba kunomphumela oshukumisayo kumzimba. Emva kweseshoni, umntu akavakalelwa nje ngoxolo kuphela, kodwa egcwele amandla namandla, sinokuthi, uzalwa ngokutsha.
Musa ukulibala malunga nempembelelo enokuthi ukusilalisa kunamalungu. Ngethuba lokusilalisa, iingcali zisebenzisa i-yoga unyango. Yaye yena, njengoko uyazi, unempembelelo emihle kumalungu. Kwakhona, ukuxilisa oku kususa izihlunu ze-muscle kwaye kunciphisa intlungu emlanjeni, kwaye ngokubanzi kufaka umsebenzi we-musculoskelet system. Oku kwenzeka kuba ngexesha leesistim zeseshoni, amanxeba kunye nemigulane baphathwa.
Singaqaphela kwakhona umphumo omuhle we-Ayurvedic massage kwi-immunity. Oku kufezwe ngenxa yokuba kwiseshoni kukho ukukhuthazwa kweengongoma eziphilayo. Imigaqo embalwa nje yale mangaliso - ukusilalisa, kunye nempembelelo emihle iya kuvelelwa malunga neenyanga ezintandathu.
Konke malunga nokusikwa kweThai
Ulusu lwebala kunye nomzimba
Ukusikwa kweFrench kunye neentlobo zayo
Iidolets of violets, ukunakekelwa, ukulima
Kunokuba baphathe intlungu emhlane nasemisipha?
Imigaqo yokuziphatha kwindlela yokuhamba ngekhefu
Iimbotyi zamabhinqa zaseSwitzerland: iindwendwe eziphambili, i-Spring 2016, ifoto
I-Cottage I-Cheese e-Multivarquet esuka eKefir
Ikhekhe lomquba ngamakhiwane kunye ne-alimondi
Indlela yokujongana nesifo sesondlo sasebusuku
Yenza ukutya okulungileyo
Kutheni ukukhulelwa kuthatha ngaphezu konyaka?